Dhageeso Duuliyihii Diyaaradda Daallo Airline oo xog cusub bixiyey | shumis.net
Home » Layaab » Dhageeso Duuliyihii Diyaaradda Daallo Airline oo xog cusub bixiyey
Dhageeso Duuliyihii Diyaaradda Daallo Airline oo xog cusub bixiyey
Wargayska The guardian ee kasoo baxa dalka Ingiriiska ayaa qoray asagoo soo xiganaya duuliyihii waday diyaaradii uu shalay dabku qabsaday ee ay leedahay shirkadda Daalllo in qarax ka dhex dhacay diyaarada dhexdeeda.
Duuliyahaan oo magaciisa la yiraahdo Vladimir Vodopivec oo la hadlay wargeyska kasoo baxa caasimada dalka Serbia ee Belgrade ayaa sheegay in qarax weyn uu ka dhex dhacay diyaaradda sida uu yiri waxaana uu intaa ku daray inuu aaminsanyahay in cilado kale ay diyaaradda qabsadeen diyaaradda.
Vladimir Vodopivec oo 64 sanno jir ah waxaa uu sheegay inuu maqlay daryanka qarax weyn oo diyaaradda ka dhex dhacay kadibna uu ku daadaalay sidii diyaaradda oo bad qabta uu dhulka u geyn lahaa.
“Waxaan maqlay qarax weyn oo na qal qal galiyay nasiib wanaag qeybteena waxba sooma gaarin sidaa darteed waxaan xooga saarnay in diyaaradda aan garoonka dib ugu celino Alle mahadiisna waan ku guulaysanay” ayuu yiri Vladimir Vodopivec oo ah duuliyihii diyaaradda Daallo ee shalay dhibaatadda qabsatay waxaana uu intaa ku daray inay u aheyd markii ugu horeysay ee dhacdo noocaan oo kale ah qabsato diyaarad uu wado.
Wargeyska aanu xiganayno ee The Guardian ayaa ku waramaya saraakiil dhanka amaanka oo uu la xariiray ay aaminsan yihiin in diyaaradda qarax ka dhex dhacay isla markaana ay baarayaan ruux la sheegay inuu ka dhacay diyaaradda.
John Goglia oo ah qabiir mar la shaqeeyay shirkad ka shaqaysa badqabka diyaaradaha oo Maraykanka jooga ayaa sheegay in marka la eego sawirada laga qaaday ay muujinayaan waxyaabaha qarxa diyaaradda la dhex dhigay.
In labo shay ay diyaaradda daloolin karaan ayuu sheegay John Goglia kuwaasoo ah qarax meel la dhigay ama awood kale oo ka xoog badan.
Cawaale Kulanne oo ah ku xigeenka danjiraha Soomaaliya u jooga Q,M oo ka mid ah rakaabkii diyaaradda la socday ayaa bartiisa Facebooga ku qoray in jugta qarax weyn ay maqleen islamarkaana muddo dhawr ilbiriqsi ah ay qiic isla arki waayeen rakaabkii saarnaa.
Danjir Cawaale waxaa uu socday shirka Jabuuti ay ku yeelanayaan diblomaasiyiin dhawr wadan ka socota.
Mas’uuliyiinta shirkadda Daallo iyo dawlada Soomaaliya midna ma bixin faafaafin dhameystiran oo la xariirta waxa diyaaradda ku dhacay hase ahaatee ay baarisi socoto.
Halkaan Riix Kadib Dhageeso Codka
Title: Dhageeso Duuliyihii Diyaaradda Daallo Airline oo xog cusub bixiyey
Posted by galmada Net, Published at February 04, 2016 and have 0 comments